I-Renaissance, i-albhamu entsha ka-Beyoncé, isivele inedethi yokukhishwa | Bezzia
I-Renaissance, i-albhamu entsha ka-Beyoncé, isivele inedethi yokukhishwa
UMaria vazquez | 19/06/2022 22:00 | Izindaba
U-Beyoncé umemezele kafushane kuleli sonto i Ukuqaliswa kwe-Renaissance. Lo msebenzi omusha uza ngemuva kweminyaka eyisithupha ngemuva kwe-albhamu yakhe yokugcina eyedwa iLemonade aqokwe kuyona ngecwecwe elingcono kakhulu lonyaka kuma-Grammys futhi wawina indondo ye-albhamu yomculo we-urban ehamba phambili yesimanje.
Ukunyakaza ku amanethiwekhi omphakathi yamaciko avame ukubikezela isimemezelo esibalulekile. OkukaBeyoncé kwaba okufanayo. Konke bekuyisu lokwethula i-Renaissance Act 1, ingxenye yokuqala ye-albhamu ezoshicilelwa ngezenzo ezimbalwa. Ihlelelwe uJulayi 29Ingabe ukhona ongabaza ukuthi kuzonikeza okuningi ukukhuluma ngakho?
UBeyonce nguye umculi onemiklomelo eminingi ye-Grammy zomlando, 48 sezizonke. Umlando wayo omude noyimpumelelo usho ukuthi noma yisiphi isikhangiso sinomthelela womhlaba ngokuzenzakalela. Amagama ambalwa abhaliwe, umdwebi akakadingi lutho olunye ukuze wonke umuntu akhulume ngalokhu kubuya okulindelwe isikhathi eside.
2 amaphrojekthi akhe akamuva
Yini esiyaziyo ngeRenaissance namuhla? Ngaphandle kokuthi isenzo sokuqala sizokhishwa ngoJulayi 29, kuncane okunye osekwenzekile kulo msebenzi. siyakwazi lokho kuphela Kuzohlanganiswa izingoma ezingama-16 igqugquzelwe futhi yaqanjwa kusukela ngo-2020.
Ukuthi lo mculi useneminyaka eminingi esebenza kulo msebenzi omusha akuyona into entsha. Ezingxoxweni ezenziwe ngonyaka odlule, lo mculi ukuqinisekisile ukuthi ubegqokile unyaka nesigamu estudiyo. Ngokuphathelene nomgomo wakhe ngalo msebenzi omusha, wabe esephawula: "Ngakho konke ukuhlukaniswa nokungabi nabulungisa konyaka odlule, ngicabanga ukuthi sonke sikulungele ukuphunyuka, ukuhamba, ukuthanda nokuhleka futhi." “Ngizwa sengathi kukhona ukuvuselelwa okuzayo, futhi ngifuna ukuba yingxenye yokubhebhethekisa lokho kuphunyuka nganoma iyiphi indlela. «, wanezela.
Kuzodingeka silinde kuze kube uJulayi 29 ukuze silalele ingxenye yokuqala yalo msebenzi omusha womculo. Kodwa, hhayi kangako ukuba nemininingwane eminingi mayelana nalena, noma siyethemba!
amaphrojekthi akhe akamuva
Ukuthi sekuphele iminyaka eyisithupha uBeyoncé ashicilela incwadi yakhe yokugcina akusho ukuthi usemisiwe. Kusukela ngo-2006 umculi uye wabamba iqhaza emisebenzini ehlukahlukene efana ne AbakwaCarters, iphrojekthi yomculo abelana ngayo nomyeni wakhe uJay-Z. Futhi abakhiphe ngayo i-albhamu ethi Everything Is Love ngo-2018.
Ngemva konyaka, umculi waqamba futhi wanikeza izwi izingoma ezimbalwa zenguqulo entsha ye I-Disney yakudala ethi The Lion King. Ngaphandle komculi, kwasebenzisana nezinye izihlabani ezifana noChildish Gambino, Kendrick Lamar, Pharrel Williams noma indodakazi yakhe uBlue Ivy. Enye yezingoma ezikwithrekhi yomsindo, i-Black Parade, iwine i-Grammy yango-2021 yokusebenza kahle kakhulu kwe-R&B, yanikeza u-Beyoncé igramafoni yakhe yegolide yesi-28.
Ngawo lowo nyaka umculi wanikeza izwi lokuthi Be Alive, ingoma evela kumsindo we-The Williams Method. U-Beyoncé uvule ama-Academy Awards angu-94 ngokudlala kwale timu ezinkundleni zethenisi e-Tragniew Park e-Compton, ephelezelwa u-Blue Ivy Carter, abalingisi be-King Richard, u-Saniyya Sidney no-Demi Singleton, kanye ne-Compton Cowboys Junior Equestrians.
Lo mculi useke wasebenzisana nabaculi abehlukene njengabo Umrepha uMegan Thee Stallio kwi-remix ye-Savage ngo-2020 noma uNicki Minaj ahlanganyela naye ngo-2021 Flawless,
Kusukela athola udumo ngasekupheleni kwawo-1990 njengomculi ohamba phambili weqembu lamantombazane e-R&B i-Destiny's Child, umsebenzi ka-Beyoncé usukhulile. Ngo-2014, wafakwa ohlwini lwe-Time magazine Abantu abayi-100 abanethonya kakhulu emhlabeni futhi ngoMashi 14, 2021, phakathi nomcimbi wama-Grammy Awards, waqopha umlando ngokuba yiciko lesifazane eliklonyeliswe kunawo wonke emlandweni onemiklomelo engama-28.
Esigabeni sakhe sokugcina, lo mculi uphinde waqinisekisa ukuthi usethenjwa eqenjini umzabalazo womphakathi omnyama ngokumelene nokucwasa. Ngalo mqondo, ngo-2020 wethula okokuqala ethi 'Black Is King', i-albhamu ebonakalayo ehlonipha umzabalazo womphakathi omnyama futhi engabonakala ku-Disney +.
Uyafuna ukuzwa ukuthi yini entsha evela ku-Beyoncé?
Indlela ephelele ye-athikili: Bezzia » Izindaba » I-Renaissance, i-albhamu entsha ka-Beyoncé, isivele inedethi yokukhishwa
Isethi ye-manicure - Iyini into ngayinye?
Ukushiswa yilanga kunqunu kanye nezinzuzo zako eziyinhloko